Ahoana no fiasan'ny vokatra mena amperora CBD & Delta 8 THC
Cannabidiol (CBD) dia cannabinoid voajanahary ary iray amin'ireo mpiorina betsaka indrindra amin'ny hemp. Ny CBD dia azo antoka hohanina ary tsy psychoactive, lafo vidy amin'ny vokatra mahasalama mahasoa nefa tsy misy ny voka-dratsin'ny fanafody preskripsi.
Ny fizotry ny fitrandrahana mena an'ny Emperora Mena dia tsy misy simika ary mampiasa dioksidan'ny karbaonina voaporitra (CO2) hisintonana ireo fitambaran-tarehy tiana (toy ny CBD) avy amin'ilay zavamaniry hemp. Ny fizotranay dia tsy misy solvents simika mahery setra matetika ampiasaina hanalana CBD menaka. Ny fitrandrahana CO2 dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy misy poizina, heverina ho fomba fitrandrahana zavamaniry azo antoka indrindra eto an-tany.
Miara-miasa amin'ny toeram-pambolena hemp voamarina FDA any Colorado, California, ary North Carolina ny Emperora Mena CBD. Izahay dia manome ny mpamboly CBD misy klona hemp miaraka amin'ny génétique miavaka mba hahazoana antoka fa mamokatra vokatra hemp kilasy teny izy ireo. Aorian'ny sy alohan'ny hijinja ny zavamaniry hemp antsika, ny tantsaha dia mitsapa ny akoran'ny zavamaniry mba hahazoana antoka fa tsy misy bobongolo, bobongolo na metaly mavesatra izany.
Rehefa vita ny fizotran'ny fizahan-toetra, ny tantsaha avy eo dia mandefa sy manodina ireo zavamaniry manankarena fitobiana ho an'ny iray amin'ireo toerana fanonganana fahazoan-dàlana izay avy eo mamadika ny vokatra ho vokatra CBD anton'izao tontolo izao.
Ny vokatra vita anay dia novokarina tamin'ny alàlan'ny dingana voamarina ISO na GMP. Ny karazana tokana misy CBD sy marijuana THC tsy manam-paharoa sy patanty dia mamokatra cannabinoids sy terpenes mahasoa kokoa noho ny karazana landrace na hemp mitovy amin'izany hita amin'ny hemp indostrialy sinoa na eropeana.
Raha ny orinasa hafa dia niady tamin'ny rongony marobe mba hamokatra THC bebe kokoa, ny ekipan'ny génétika dia namorona karazana marijuana mba hamokarana LESS THC hamokarana galona cannabinoid tsy psychotropika bebe kokoa toa ny CBD, CBG, CBN, Delta 8 THC, ary CBC
Ny vokatray rehetra dia novolavolaina mba hanasongadinana karazana cannabinoids sy terpenes feno, ary isaky ny vokatra ny Emperora Mena CBD & Delta 8 THC dia voamarina amin'ny laboratoara iray tsy miankina mahaleo tena mba hiantohana ireo vokatra azo antoka, tsy miovaova ary mahery vaika mamela ny mpanjifanay. hiaina fiainana mahasalama kokoa.